လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
comments: ဒီလေ့လာမှုကနေ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များ 19.5 ခဲ့၏အသက်အရွယ်ကိုဆိုလိုတာ။ 1948 အတွက် Kinsey ED နှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြ345 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့%, လူ 1 နှင့်အောက်တွင်ဘို့ထက်နည်း 20% ၏။
လေ့လာချက်: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ: လူပျိုတို့အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။
J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး။ 2012 Jul;51(1):25-31.
Doi: 10.1016 / j.jadohealth.2012.01.008 ။
Mialon တစ်ဦးက, Berchtold တစ်ဦးက, Michaud PA ဆိုပြီး, Gmel, G, Suris JC.
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များဆွစ်ဇာလန်လူပျို၏လူဦးရေအကြားအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် (PE) နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုတိုင်းတာဖို့နဲ့အချက်များဒီအသက်အရွယ်-အုပ်စုသည်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးချင်းစီအခြေအနေ (PE နဲ့ ED) အတွက်ကျနော်တို့မဟုတ်ကြသောသူတို့နှင့်အတူအခွအေနေခံစားနေရပြီးလုလင်တို့သည်နှိုင်းယှဉ်သီးခြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အုပျစုပထမဦးဆုံးမှာပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း (ဆေးလိပ်, အရက်, ဆေးခြောက်, အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဆေးညွှန်းမပါဘဲဆေး), Self-အစီရင်ခံခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း, လိင်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုအရှည်နှင့်အသက်အရွယ်အဘို့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် တစ်ဦး bivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်လိင်ဆက်ဆံမှု), စိတ်ကျရောဂါအခြေအနေ, စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို။ ကျနော်တို့ပြီးတော့တစ်ပြိုင်နက်တည်းအားလုံးသိသာ variable တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကို log-linear ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
PE နဲ့ ED များအတွက်ပျံ့နှံ့နှုန်းအသီးသီး 11% နှင့် 30% ရှိကြ၏။ ညံ့ဖျင်းသောစိတ်ကျန်းမာရေးအလားအလာရှက်ကြောက်ဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အသင်းအဖွဲ့ရှိသည်ဖို့တစ်ခုတည်းသော variable ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ED တိုက်ရိုက်ညွှန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏အရှည်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမရှိဘဲဆေးဝါးတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေခဲ့ပါသည်သော်လည်းအပြင်, PE ကိုတိုက်ရိုက်, ဆေးရွက်ကြီးတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ, လူပျို၏သုံးပုံတစ်ပုံအနည်းဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေခံစားနေကြရသည်။ အကွိမျမြားစှာကျန်းမာရေး-အလျှော့အချက်များကဤအလုပ်မဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားကျန်းမာရေးပညာရှင်များမိမိတို့၏ငယ်ရွယ်အထီးလူနာနှင့်အတူလိင်အကြောင်းပြောဆိုရန်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုယူစေခြင်းငှါအားပေးရန်အဘို့အအနီရောင်အလံအဖြစ်ပြုမူသင့်တယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာများအတွက်မူပိုင်ခွင့်© 2012 Society က။ All rights reserved Elsevier Inc ကိုထုတ်ဝေသည်။